July 2019 - Page 4 of 4 - Book News Madagascar
Rotary Club Tsimbaroa Antananarivo – Ankizy 70 000 no ezahina hisitraka ny « bibliobus » ao anatin’ny herintaona
aHamafisina ny asan’ny « bibliobus » mandritra ny fotoam-piasana 2019-2020″, hoy ny Filohan’ny Rotary Club Tsimbaroa Antananarivo vaovao, Lizah Ndrialisoa. Bibliobus Hatramin’ny taona 2005 no niasa ho an’ny ankizy eny amin’ny sekoly Ambatonakanga voalohany sy Ambatonakanga faharoa ny « bibliobus » Rotary Club Tsimbaroa. Mitety ny faritra Antananarivo sy ny manodidina ity « bibliobus » ity, Read more…
Analavory – Asa fanafihan-jiolahy, telo maty, efatra voasambotra
Jiolahy telo no maty voatifitra raha nifanenjika tamin’ny zandary ny Alatsinainy hariva tao Analavory. Tifitra Jiolahy miisa telo (3) voatifitra ary maty avy hatrany raha nifanenjika tamin’ny zandary ny alatsinainy hariva tao Analavory, faritra Bongolava tokony ho tamin’ny dimy ora. Tratra nandritra izany ny basy miisa telo (3), ny roa Read more…
Fampianarana ambony – Mahatratra 320 ireo voka-pikarohana asehon’ny mpianatra ao amin’ny ISPM
Mpianatra maro eo anivon’ny sekoly ambony ISPM no mampiranty ireo voka-pikarohany araka ny lalam-piofanana misy azy avy mandritra ny 2 ka hatramin’ny 6 jolay eny amin’ny ISPM Ambatomaro Antsobolo. Fampirantiana ireo voka-pikarohana Nanomboka omaly ary tsy hifarana raha tsy amin’ny Sabotsy 6 jolay izao ny fampirantiana ireo voka-pikarohan’ny mpianatra eny Read more…
Sera’b Ny Asa – Les jeunes ont pu découvrir les réalités du monde du travail
Occasion de trouver du travail, de déposer des CVs mais aussi de s’informer sur l’entrepreneuriat, le salon « Sera’b ny asa » a permis aux jeunes malagasy de découvrir un peu plus le monde du travail. Album photo disponible sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/booknewsgas/albums/932995913733069/ ©Tsiky Photography Opportunité Grande opportunité pour les jeunes Read more…